Ethiopia: Aqalka Baarlamaanka Dawlada Wadaaga Ethiopia oo Ansixiyey Aduun Dhan 117.8 Bilyan oo ah Miisaaniyada 2011/2012. – Rasaasa News
Jul 6, 2011 Ethiopia: Aqalka Baarlamaanka Dawlada Wadaaga Ethiopia oo Ansixiyey Aduun Dhan 117.8 Bilyan oo ah Miisaaniyada 2011/2012.
Aqalka wakiilada dadweynaha dawlada wadaaga Ethiopia oo cod buuxa ku ansixinta shalay miisaaniyada sanadka 2011/2012 aduun dhan 117.8 bilyan oo Birr.
Xisaabta miisaaniyada ee loogu talo galay sanadkan 2011/2012, ayaa ka badanaysa tii sanadkii hore 39%, taas oo uu cadaynayso faylka la hayo. Xisaabtan ayey 76.2% miisaaniyada qaranka ayaa ka imanaysa ilaha dhaqaalaha ee dalka, 23.8% waxay ka imanaysaa ilo dibada ah.
71% xisaabta guud ee miisaaniyada qaranku waxay gali doontaa dhismaha wadooyinka, waxbarashada, cuntada, caafimaadka, awooda dhismaha iyo mashaariicda horumarinta reer miyiga, arintaas oo la siin doono mudnaanta iyada oo la eegayo qorshaha shanta sano ee kobcinta iyo qaabaynta.
Dawlada wadaaga ah, ayaa ugu talo gashay 15 bilyan oo lagu kabayo miisaaniyada degaanada si looga caawiyo dhamaystirka higsiga horumarka ee taariikhda miilaadiga Ethiopia.
R/wasaare Melse Zinawi oo hadal gaaban oo ku saabsan miisaaniyada u jeediyey xubnaha aqalka baarlamaanka ayaa yidhi “miisaaniyada waa la jaangooyey iyada oo xisaabta lagu darayo kor u kaca sicirada jira iyo waxyaabo kale oo muhiim ah.”
R/wasaaruhu wuxuu yidhi “hankaaga miisaaniyada waxaa loo dabooli iyada oo la iibinayo bond. Samaynata miisaaniyada waxaa taxadar gaar ah la siiyey qorshaha yaraynat caydhnimada. “hawlo ayaa laga qabtay sicir bararka si hoos loogu dhigo 3.9%” ayuu yidhi R/wasaaruhu